लन्डनमा चाँदीको काँटाचम्चा चोर्दै गर्दा भारतीय पत्रकार रंगेहात पक्राउ – Medianp
लन्डनमा चाँदीको काँटाचम्चा चोर्दै गर्दा भारतीय पत्रकार रंगेहात पक्राउ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २७, २०७४१३:५४1
एजेन्सी । भारतीय पत्रकार चाँदीको काँटाचम्चा चोरेको आरोपमा लन्डनमा पक्राउ परेका छन् । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसँग लन्डन पुगेका पत्रकारहरु होटलको टेबुलबाट काँटाचम्चा चोर्दै गरेको अवस्थामा रंगेहात फक्राउ परेका हुन् ।
ममताको सम्मानमा एक होटलमा आयोजना गरिएको रात्रिभोजमा ममतासहित उच्च पदस्थ कर्मचारी, उद्योगपतिहरु र भारत तथा बेलायतका केही चर्चित व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।
रात्रिभोजका दृष्य उच्चस्तरका सिसिटिभी क्यामेराबाट होटल प्रशासनका कार्मचारीले नियालिरहेका थिए । सोहीक्रममा केही भारतीय पत्रकारले धमाधम टेबलबाट चाँदीका चम्चाकाँटा आफ्नो ब्यागमा हालिरहेको देखियो । उक्त दृश्य हेरिरहेको होटल प्रशासनले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।
तर, रात्रिभोज सकिनै लाग्दा भने होटलका केही कर्मचारी आएर ती पत्रकारलाई काँटाचम्चा चोरेकोबारेमा आफूहरुले थाहा पाएको बताए । त्यसपछि केही पत्रकारले काँटाचम्चा फिर्ता गरे पनि एकजनाले भने आफूले नचोरेको दावी गर्न थाले ।
होटलका कर्मचारीले ती पत्रकारलाई प्रहरीमार्फत आवश्यक कारवाही हुने धम्की दिएपछि भने उनले गल्ती स्वीकार गरे । उनले ५० डलर जरिवानासमेत तिरेका छन् ।
सो घटना जानकारीमा आएपछि मुख्यमन्त्री ममता ती पत्रकारप्रति रुष्ट भएकी छन् । पत्रकारले काँटाचम्चा चोरेको घटनाबारे बाहिर ल्याएपनि भारतीय संचारमाध्यमले चोरीमा संलग्न पत्रकारको पहिचान खुलाएका छैनन् ।
पत्रकारले काँटाचम्चा चारेको बाहिर आएपछि भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको टिप्पणी
‘एक परिवार एक गाई÷भैँसी उपलब्ध गराउ’
कोरियाली वार्ताले राम्रो उर्जा दिएको छ– राष्ट्रपति ट्रम्प
One thought on “लन्डनमा चाँदीको काँटाचम्चा चोर्दै गर्दा भारतीय पत्रकार रंगेहात पक्राउ”
Lovely kanxo says:
2018-01-11 at 5:04 pm
साला धोती हरुको औकात भनेको तेहि हो हाहाहा हा हा कति हास्नु
मुकेश अम्बानीकी छोरी इशा, रिसेप्शन पार्टीको रोयल लुक कारण आइन् चर्चामा (तस्विरसहित)
युट्युबमा यो भिडियोले पायो वर्षकै सबैभन्दा बढी डिसलाइक , हेर्नुस् कारण (भिडियोसहित)
११७ वर्षअघि अमेरिकी फौजले लुटेको तीनवटा घण्ट फिलिपिन्सलाई फिर्ता
टर्कीमा हत्या गरिएका पत्रकार खसोग्गी टाइम पत्रिकाको ‘वर्ष व्यक्तिव’
यस्तो छ विश्वको खतरनाक सडक ! जुन देख्नुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् !
कसैले तपाईको पैसा फिर्ता नदिएर दु : ख दिइरहेको छ, अपनाउनुहोस् यस्तो तरिका
विवाहपछि पहिलो पटक स्टेजमा देखिएकी प्रियंकाले यसरी मच्चाइन् तहल्का हेर्नुहोस् (भिडियोमा )